Mas’uul British ah oo sheegay in maxakamada ICC ay soo saari doonto amar lagu soo xirayo madaxweynaha Syria – SBC
Mas’uul British ah oo sheegay in maxakamada ICC ay soo saari doonto amar lagu soo xirayo madaxweynaha Syria
London:-Nick Harvey oo ah wakiilka wasaaradda gaashaandhiga Britain ayaa sheegay in aysan shaki uga jirin in maxkamadda dambiyada caalamiga ay soo saari doonto amar lagu soo xirayo madaxweynaha dalka Syria Bashaar Al-asad .
Wargeyska the Financial Times ayaa soo xigtay hadalada Harvey kadib markii ay shaaca kaqaaday maxakamada caalamiga amar lagu soo xirano madaxweyne Qadaafi iyo mas’uuliyiin kale.
Xukuumada Britain ayaana weli ka codsan Bashaar Al-asad in uu xilka isaga dego balse waxa ay ugu baaqaday in la joojiyo rabshadaha dhiiga ku daadanaya ee ka socda dalkaas Syria.
Dhanka kale wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in dadka deegaanka Darca ay heleen xabaal wadareed halkaasi oo lagu sheegay in maamulka Syria ay ku laayeen dad ka soo horjeeda maamulka Bashaar Al-asadi.
wargeyska Alwadan ee kasoo baxa Suuriya ayaa qoray in ciidamada amaanka ay ku raadjoogaan kooxo hubeysan oo naabd diid ah oo u baxsaday magaalooyinka Banyas , ximas iyo Talkalakh iyagoo ku biiray dagaal yahano ku sugnaa xadka Lubnan.
wargeyska ayaa sidoo kale sheegay in shalay dagaal xoogan uu ku dhex maray magaalada Talkalakh kooxo hubeysan iyo ciidamada dowladda, dadka ku waxyeeloobayna ay ka tirsanaayeen kooxaha hubeysan ee kasoo horjeeda xukuumadda.